ONU Sida : vita ny asa nataon’i Salvator Niyonzima teto Madagasikara | NewsMada
ONU Sida : vita ny asa nataon’i Salvator Niyonzima teto Madagasikara
Nampahafantatra ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, ny fahavitan’ny asany teto Madagasikara omaly, ny solontena maharitry ny ONU Sida, Salvator Niyonzima. Nilaza ny fahafaham-pony tamin’ny asa vitany izy.
Nisy ny fanetsehana ireo sehatra tsy miankina hiady amin’ny fiparitahan’ny aretina Sida. Nahatratra 15 tapitrisa dolara ny famatsiam-bola iadiana amin’ity aretina ity ho an’ny taona 2016-2017. Nahafahana nanao fanentanana sy fitsaboana ireo olona mitondra ny tsimokaretina izany.
Tena misy ny aretina sida raha ny tatitra nataon’ity solontena maharitry ny ONU Sida ity. Manodidina ny 0,4% ny tahan’ny olona mitondra ny tsimokaretina amin’ny ankapobeny eto amintsika. 8%-n’ireo dia olona mpidoroka avokoa. 15% kosa ireo « homosexuels ». Efa misy ny fanadihadiana hahazoana ny salanisa farany manakaiky ny marina raha ny fanamarihana hatrany.